၁၊ ၂၊ ၅% - အနည်းကိန်းဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးစရာကုန်သွယ်မှုအနေအထားအရွယ်အစား - အွန်လိုင်းမှစတော့ရှယ်ယာများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
ဒီဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်စျေးနှုန်းညွှန်ပြသည့်နေရာတွင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ခန့်မှန်းချက်များမှန်ကန်ခဲ့လျှင်သင်သည်ပုံသေပြန်လာလိမ့်မည်။ သူတို့မှားရင်မင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အရင်းအနှီးကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ အချို့ပွဲစားများသည်အချို့သောကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင်သင်ငွေပမာဏတစ်ခုလုံးကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲစောစောစီးစီးငွေလွှဲခြင်းကိုပိတ်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အနာဂတ်အောင်မြင်မှုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကုန်သွယ်ရေးတွင်သင်ငွေမည်မျှရှိသည်ကိုဖော်ပြသည့်သင်၏အနေအထားအရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်ရန်။ ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဖြစ်သင့်ပါ။ သင်၏ဟောကိန်းများအပေါ်သင်မည်မျှခိုင်မာအားထားကြောင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းယင်းကိုမဆုံးဖြတ်သင့်ပါ။ သို့ရာတွင်သင်ကုန်သွယ်မှုသို့ ၀ င်ရောက်တိုင်းသင်အသုံးပြုမည့်ပုံသေနည်းတစ်ခုအဖြစ်ကိုင်တွယ်သင့်သည်။
အလွန်အမင်းစွန့်စားရခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှပညာရှိရာမကျပါ။ သင်စွန့်စားရန်ပြင်ဆင်ထားသည့်ပမာဏသည်ဖြစ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏လက်ကျန်ငွေ၏ ၅% ကျော်နှင့်ညီမျှသောအန္တရာယ်သည်ပညာမဲ့ရာရောက်သည်။ ငါပြောနိုင်တာကပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အကောင့်မှာစုစုပေါင်းအရင်းအနှီးရဲ့ ၁% ကိုသာစွန့်စားတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း
မင်းမှာအကောင့်ထဲမှာဒေါ်လာ ၁၀၀ ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ $ 100 သို့မဟုတ် $ 1 ထက် ပို၍ မစွန့်စားရန်သင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အရင်းအနှီး၏ ၁% နှင့် ၂% အသီးသီးဖြစ်လိမ့်မည်။ $2သည်အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းထိုသို့သောအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ။
အလွန်အကျွံစွန့်စားရခြင်းသည်များသောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည် အသစ်ရောက်ရှိလာသော လုပ်။ သူတို့သည်လျင်မြန်စွာငွေရှာရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်စင်မြင့်သို့လာကြသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါသူတို့ကဒေါသထွက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်တယ်။ သူတို့သည်ကြီးမားသောပမာဏကိုထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုပြန်ပေးလိုကြသည်။ ဒီဟာကအရာရာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထိလမ်းကြောင်းတိုလေးပါ။
ထို့ကြောင့်သင်၏အရင်းအနှီးကို ဦး စွာကာကွယ်သင့်သည်ဟူသောစည်းမျဉ်းကိုသင်အမြဲလိုက်နာသင့်သည်။ ငွေကိုအကောင့်ထဲမှာဘယ်လိုသိမ်းရမလဲဆိုတာလေ့လာပါ၊ ပြီးတော့အမြတ်အစွန်းရအောင်စဉ်းစားပါ။ သေးငယ်သောပမာဏကိုအန္တာရာယ်ရှိခြင်းသည်သင့်အားကွဲပြားသောနည်းစနစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည့်အရာနှင့်အဘယ်အရာကိုမလုပ်ရန်အချိန်ပေးသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးစရာများရောင်းဝယ်ခြင်းတွင်သတ်မှတ်ထားသောအန္တရာယ်ရှိသည်။ သင်အစမှအဘယ်သို့ဆုံးရှုံးနိုင်သည်ကိုသိသောကြောင့်၎င်းသည်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရွယ်အစားသည်သင်ရောင်းဝယ်မှုတစ်ခုတွင်ထည့်ထားသောပမာဏနှင့်ညီသည်။
သင်တစ် ဦး တည်းသောကုန်သွယ်မှုအတွက်သင်ထားသင့်သောငွေပမာဏအတိအကျတွက်ချက်ဖို့ဘယ်လို? သင်လေ့လာပြီးခဲ့သမျှကိုအကျဉ်းချုံးပါ။ သင်ဆုံးရှုံးရန်ပြင်ဆင်ထားသည့်ငွေပမာဏသည်သင်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်သင်ယူနိုင်သောစွန့်စားမှုပမာဏဖြစ်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်.
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရှိပြီးသင်ကအရင်းအနှီးတစ်ခုလုံး၏ ၂% ကိုစွန့်စားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးလိမ့်မည်။ အမှု၌အဘယ်သူမျှမကပြန်အမ်းလည်းမရှိ မင်းရဲ့ပွဲစားနှင့်အများအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမရှိပါတယ်, သင်၏အများဆုံးအန္တရာယ် $ 20 ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်မှာသင်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ငွေပမာဏထည့်ရန်သင်ထည့်သင့်သောနံပါတ်ဖြစ်သည်။ သင် $ 20 ကိုကုန်သွယ်မှုတစ်ခုအတွက်နေရာချပြီးသင်ဒေါ်လာ ၂၀ ဆုံးရှုံးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
အစအ ဦး ၌၊ နေရာတစ်ခုကိုဖွင့်တိုင်းတိုင်းတွင်အရွယ်အစားကိုတွက်ချက်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုရာခိုင်နှုန်းစွန့်စားမှုသည်းခံမှုနှင့်သင်ဝင်ရောက်တော့မည့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်အညီဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်ရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ သတိပြုရန်မှာသင်ထည့်နိုင်သည့်ငွေပမာဏသည်သင်၏အကောင့်ရှိအရင်းအနှီးပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်အနိုင်ရရှိသောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုအပြီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုတိုးနိုင်ပြီးသင်ဆုံးရှုံးပြီးသောအခါထိုပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အရေးကြီးသည့်အရာမှာရာခိုင်နှုန်းမှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အချိန်နှင့်အလေ့အကျင့်ရှိခြင်းဖြင့်အရင်းအနှီးပမာဏအနည်းငယ်အတက်အကျမခွဲခြားဘဲမည်သို့ပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအပေါ်မည်သို့လုပ်ကိုင်ရမည်ကိုလေ့လာရမည်။ ကြည့်ရှုပါ၊ ငါ့အကောင့်ထဲမှာအမြဲတမ်းအလားတူကိန်းဂဏန်းရှိတယ်။ လကုန်မှာအမြတ်ငွေကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါကအမြတ်အစွန်းအနည်းငယ်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များအားဖြင့်အမြန်ပြန်ကောင်းလာမည်။ ငါပြောချင်တာကသင်အနေအထားအရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွေ့အကြုံအချို့ရရှိပြီးနောက်သင်သည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုပြောင်းလဲစရာမလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏အကောင့်ထဲရှိလက်ကျန်သည်အမြဲတမ်းဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါက (အမြတ်ငွေများကိုပြန်လည်ထုတ်ယူပြီးဆုံးရှုံးမှုများကိုဟန်ချက်ညီစေရန်) အကယ်၍ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလုံး၏ ၂% ဖြစ်သောကုန်သွယ်မှုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သင်စွန့်စားလိမ့်မည်။ သင်၏အကောင့်ထဲရှိငွေပမာဏသည်ဒေါ်လာအနည်းငယ်ဖြင့်ရွေ့လျားသွားသောအခါအနေအထားအရွယ်အစားကိုမပြောင်းပါနှင့်။
သင်ပြုလုပ်သောကုန်သွယ်မှုတိုင်း၌အနေအထားအရွယ်အစားကိုမချိန်ညှိခြင်း၏အားသာချက်တစ်ခုမှာသင်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့်ရာခိုင်နှုန်းများကိုသင်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘဲသင်လုပ်ဆောင်မှုကိုသာအာရုံစိုက်နိုင်သည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်ပါကသင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သာထားပါ။ ဒေါ်လာ ၉၀ သို့မဟုတ် ၁၀၅ ဒေါ်လာရှိပါကရေရှည်တွင်အရေးမကြီးပါ။
စိတ်ကူးတစ်ခုလုံးမှာသင်၏အကောင့်၏ ၁% သို့မဟုတ် ၂% ကိုသာစွန့် စား၍ ကုန်သွယ်မှု ၅၀၊ ၁၀၀ ဆုံးရှုံးလျှင်ပင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုမဖြုတ်ပစ်ရန်သတိပြုမိသည်။
သင်စွန့်စားလိုသည့်နေရာပမာဏကိုတွက်ချက်ပါ။ သင်၏အရင်းအနှီး၏ ၁% သို့မဟုတ် ၂% နှင့် ၅% ထက်မပိုရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကြံပြုထားကြောင်းသတိရပါ။ နံပါတ်ရလျှင်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတွင်သင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အများဆုံးငွေပမာဏဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီမတိုင်မီတွက်ချက်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ။ သင်၏အကောင့်ရှိလက်ကျန်ငွေနှင့်အနေအထားအရွယ်အစားကိုချိန်ညှိပါ။ အချိန်နှင့်အမျှသင်အတွေ့အကြုံရရှိပြီးသင်၏အကောင့်တည်ငြိမ်လာသောအခါ၊ သင်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းတွက်ချက်မှုများကိုကျော်။ တူညီသောငွေပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ သေးငယ်သည် အတက်အကျ သင်၏အကောင့်ရှိအခြေအနေအားလုံးကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Tags: binary options များ martingale နှင့်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဂဏန်းတွက်စက်, ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု, ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုဒီဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာ, မြို့တော်ရာခိုင်နှုန်း, ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းဒစ်ဂျစ်တယ် options များ, အနေအထားအရွယ်အစားဒစ်ဂျစ်တယ် options များ, ကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစား binary options များ, ကုန်သွယ်မှုအရွယ်အစားဒီဂျစ်တယ် options များ